September 2012 - सिसाकलम ब्लग
by Unknown at 19:240प्रतिकृया
by Unknown at 10:060प्रतिकृया
विधा : आर्थिक कार्टून, राजनीतिक कार्टून
तस्बिर साभार : cliker.com
मेरो एयरफुनको पिन
घरी घरी घरी कान चिलाउछ
त्यै सजिलो लाग्छ कान कन्याउछु
दाँतमा अली अफ्ठेरो महसुस हुन्छ
बिहान खाएको हरियो साग अड्केको पाउछु ।
त्यही पिन छिराउछु साग झिक्न ।
घिन लाग्छ ,
वाक्क गर्छु , मुख खोकल्छु ।
फेरी कान चिलाम्छ
कानैमा घुसार्छु ।
आनन्द हुन्छ ,
आहा भन्छु ।
by Unknown at 07:030प्रतिकृया
विधा : फेन्टासी कबिता
by Unknown at 19:560प्रतिकृया
विधा : राजनीतिक कार्टून
by Unknown at 07:260प्रतिकृया
यसपाली तिजमा दर र दारुले खुबै चर्चा पायो । मनसुन सकिएर भर्खर पानी छिट्याउन थाले पछी सुरु भएको दर खाने क्रम अस्ती पात्रो मै लेखिदिएको दर खाने दिनमा आएर टुङ्गिएको छ । परार भन्दा पोहोर बढी पोहोर भन्दा अहिले बढी देखिएको महिनौ दर खाने चलन बढदै गएको देख्दा यस्तो लाग्छ कि । अब कुनै बर्ष देखी नेपाली महिलाहरु सालीन्दा नौ महिना दर खान्छन एक दिन ब्रत बस्छन र दसैं कटाएर बाँकी समय सामान्य जीवनयापन गर्छन ।
तस्बिर साभार : orgs.okstate.edu
"क्यार्न खाएको त्यो उल्काले दर ?" नसोध्नोस सिधै उत्तर आम्छ कि " पुरुषहर्ले बाह्रै महिना दारु खान हुने । अनी हामीले चै जाबो एक डेड महिना दर खान किन नहुने ?" त्यसो त दर दरमा मात्र सिमित छैन । दरमा खाद्य पदार्थ मात्रै पनि सिमित छैन । प्रसस्तै भेटिन्छन पेय पदार्थ मिसाउनेहरु पनि । नत्र के का अम्बल ले खान्थे र महिनौ दर ? खिर को लत पक्कै बस्दैन । मासुको लत पक्कै बस्दैन । भटारे, पुलाउ , लालु राजमा टक पक्कै बस्दैन । गिलासमा खन्याएर जुस, कोकाकोला सधैं पिउन मन लाग्दइन । अचेल महिलाका गिलासमा पनि पुच्छर उम्रिन थाललेका प्रसस्तै देखिन थालेका छन । तब न दर दारुको बाहना बन्न थालेको छ । र महिलाहरुले महिनौ सम्म दर खाए की दारु खाए अली कन्फ्युज कन्फ्युज भएको छ ।
by Unknown at 20:230प्रतिकृया
बच्चामा पढाईको सुरुवात नै ए फर एप्पल बाट भएर हो कि किन हो । जुनै मानिस पनि स्याउ भनेसी हुरुक्क हुन्छन । राती रङमा पाइने गुलियो फल स्याउ स्वादमा पनि कम्ता मिठो हुन्न । त्यसैको स्वादमा आदी मानवहरु फसेर संसारमा पापको जन्म भएको हो रे । तर अचेल त्यो गुलियो रातो फलले मान्छे हुरुक्क भएका होइनन । अहिले हुरुक्क भएका छन त स्वादहिन सेतो फलले । अचेल स्याउ अर्थत एप्पल भन्नाले रुखमा फल्ने फल बुझिन्न । बरु हाम्लाई सबभन्दा बढी लोभ्याउने ग्याजेट हरु आइफुन , आइप्याडका जुठो स्याउको चित्र अन्कित ब्राण्ड लाई बुझाउछ । जुन यो पुस्ताको लागी सबैभन्दा दाम्मी गिफ्ट बनेको छ ।
by Unknown at 20:100प्रतिकृया
समय अत्यन्त लोसे भैरहेछ । जहाँ सबै प्रगतीहरु घस्रिदै छ । सबै कुरा ओरालो गतिमा तिब्र छ । तर अपवाद,बजारमा बस्तुको मुल्य भने बढी रहेछ बढीरहेछ उभोतिर ।
सुनियो मुला पर्साद, फर्सी कुमारी ,गाजरी नानी, टमाटर लाल , भेन्टामणी , परवल राम ,आलु कुमार , काउलिनी बजै लगायत सारा तरकारीहरुका मुल्यहरु एक दिन पर्वतारोहणमा उत्रिए रे । छिडी चडेर सुरु भएको उनिहरुको पर्वतारोहण । साना साना पहाड हिमाल हुँदै अन्नपूर्ण मनास्लु सम्मा पुगिसक्यो रे । धौलागिरीमा त उहिल्यै बसेर उनिहरुले बियर दन्काइसके रे ।
यता पेट्रोलियन पदार्थको मुल्यलेले झन औधी गरिसकेछ । बिस्तारि उहिल्यै खुत्रुक खुत्रुक नाम्छे हुँदै सगरमाथा उकालो लगाएर अस्ती नै बिजयी झन्डा फहराएछ । यता का उपभोक्ता ट्वाँ परेका पर्यै । कारण अब पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य सगरमाथा पुगी सक्यो । अब त यो खरिद गर्न तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको भन्दा कम साहसले पुग्दैन ।
by Unknown at 20:240प्रतिकृया
माधव र कुर्सी